Maxaa loola jeedaa ganacsadaha ganacsigu? Fiiri qeexida Lexicon Financial
Start daymaha -Leaks Unternehmerkredit
1 Waa maxay deyn ganacsi?
2 Waxtarrada deynta ganacsadaha
2.1 Deymaha ganacsi ee shuruudaha gaarka ah ee ganacsatada
2.2 Deymaha ganacsi ee ganacsatada
2.3 Shuruudaha deynta ganacsiga
2.4 Dammaanadda iyo amarjansiga
Der Unternehmerkredit waxaa loo sameeyey si gaar ah ganacsatada iyo iskii u shaqeysta. Haddii aad dalbato deyn ganacsi, mashruucaaga waxaa hubin doona hay'adda amaahda iyo qadarka deynka oo si gooni ah loogu heshiiyay. Shuruudaha muhiimka ah ee aad tahay ganacsade ganacsi ah ayaa la siiyaa deyn dhan dhammaantiis waa xulashada foomka sharciga ah ee saxda ah ee shirkaddaada. Sida arjiga deyn gaar ah, shirkaddaada waxaa qiimeynaya hay'adda amaahda iyadoo loo marayo habka qiimeynta. Shuruudaha loo isticmaalo arrintan ma aha labis. Maqaalka soo socda ayaa kugula socodsiinaya faa'iidooyinka gaarka ah ee deynta ganacsadaha iyo faahfaahinta macaamilka.
Waxtarrada deynta ganacsadaha
Deyn gaar ah oo ganacsi ayaa ku siinaysa fursad aad ku hesho dhaqaale maaliyadeed si aad u dhisto madax-bannaanidaada. Ka dib markaad codsatay oo aad ansixisay, lacagta amaah wakhti kasta. Helitaanka amaahda ganacsigu waa mid aad u dhib badan marka loo eego deynta rasmiga ah. Sababta tan waxay tahay inaad tahay ganacsade aanad heli karin dakhliga joogtada ah isla markaana kuu soo bandhigi kara caddayntaas. Maadaama aadan haysan kaliya fikrado cusub, laakiin sidoo kale dhiirigelinta iyo waxqabadka, taas oo saameyn wanaagsan ku yeelan karta horumarinta dhaqaalaha, waxaad nasiib u yeelan doontaa inaad haysato deyn ganacsi oo la ansixiyey. Amaahda shirkadu waxay ku siinaysaa macaamil dhaqaale si aad uga jawaabto jilicsanaanta farsamooyinka cusub ee farsamooyinkaaga, xitaa haddii miisaaniyadda jirta aysan ku filneyn.
Deymaha ganacsi ee shuruudaha gaarka ah ee ganacsatada
Bangiyada qaarkood waxay bixiyaan si amaah ah ganacsade heerar gaar ah soo jiidasho leh haddii aad rabto si ay u dhisaan sida aasaasayaasha shirkad. Ganacsade ahaan, tusaale ahaan, waxaad samayn kartaa lacag gooni ah. Gaar ahaan, taas oo macnaheedu yahay in aad leedahay dabacsanaan si ay u go'aansado hadii uu dib u bixiyo ama ganacsigaaga amaahda bilaabi-up in lacag hal mar ah la kordhiyo qaybood bil kasta xaddiga amaahda iyo sidaas si loo yareeyo dulsaarka. Haddii shirkadda ma ordi iyo sidoo kale aad, uu filayaa, lid ku ah filayo, waxay bixisaa amaahda bilowga-ups fursad si aad u dalbato la yareeyo lacagta bil kasta oo aad wax amaahiya. Kharashka dheeraadka ah laguma soo dalacayo kiiska caadiga ah. Kuwa ganacsadaha leh, amaahda ganacsadaha ayaa ah deyn dabacsan oo guud.
Deymaha ganacsi ee ganacsatada
Waxaad codsan kartaa oo kaliya deymaha ganacsi ee ganacsatada leh dulsaarka dulsaarka ee KfW Bank. Hay'addan deynta ah ayaa ujeeddadeedu ahayd in ay si fiican u maalgeliso bilowga dhaqaalaha iyo ganacsatada dhexdhexaadka ah. Lacagta ugu badan ee deymaha ee deynta ganacsigu waxay ku kooban tahay wadarta 10 million euro. Haddii aad rabto inaad isticmaasho isku deyminta maalgashiga, Bangiga KfW ayaa sidoo kale kuu ballanqaaday Beriyeelaynta ee qadarka xaddiga ah ee 50 boqolkiiba.
Shuruudaha deynta ganacsiga
Ka hor inta aadan helin deyn ganacsi ama deyn ganacsi, waa inaad buuxisaa qaar ka mid ah nidaamka. Tusaale ahaan, waa inaad bixisaa caddayn inaad haysatid xirfadaha mihnadaha iyo xirfadaha lagama maarmaanka ah. Intaa waxaa dheer, aasaaskiina waa inuu u adeegaa iibsigaaga ugu weyn. Shirkadaha ka soo jeeda jarmalka iyo dibadduba waxay codsan karaan codsi amaah ah haddii ay badanaa leeyihiin gaar loo leeyahay. Guryeynta kooxeed, wadarta guud ee laga yaabo inaysan ka sareynin 500 million euro. Haddii aad rabto inaad ganacsigaaga dibedda ka bilowdid, shirkadaha wadajirka ah ee ajnabiga ah ama shirkad ama shirkad Jarmal, oo haysta ugu yaraan 30 boqolkiiba shirkaddaada, waxay dalban kartaa deyn ganacsi.
Dammaanadda iyo amarjansiga
Ganacsade ahaan, waa inaad sidoo kale bixisaa deynta caadiga ah ee bangiga codsiga. Waxaad bangiga ka baran doontaa xaddiga deymaha. Sida aasaasaha ganacsadaha, waxaad go'aamineysaa muddada deynta oo aad dooran kartaa sanad dugsiyeedka bilaashka ah.
Rating: 3.0/ 5. Laga soo bilaabo codadka 2.
Maqaalka horeamaah Trust
Maqaalka xigtadulsaarka go'an